SOICARE 4.3L Remote Kudzora Huru Kugona Kunotonhora Mist Ultrasonic Mhepo Humidifier, China SOICARE 4.3L Remote Kudzora Huru Kugona Kunotonhora Mist Ultrasonic Mhepo Humidifier Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Maindasitiri Limited
SOICARE 4.3L Remote Kudzora Huru Kugona Kwakanyanya Mist Ultrasonic Mhepo Humidifier
Nzvimbo Yokutanga: Guangdong
Model Number: SP-TH31
advertising: ISO9001-2015, CE, RoHS
Minimum Order Yakawanda: 2000 Pieces
Packaging Details: 12 Zvidimbu / katoni
Nguva Yokutora: 25-45 mazuva anoenderana nehuwandu
Mitemo Yekubhadhara: 50% dhipoziti, chiyero usati wasununguka
Kupa Mikana: 100000 zvidimbu pamwedzi
4.3L Remote Kudzora Huru Kugona Ultrasonic Mhepo Humidifier ne hypochlorous acid mvura inoshandisa
Main mabasa uye maficha:
1.Remote Control uye Timer Setting: Zviri nyore kushandisa, unogona kushandisa ese mashandiro neremote control kana kungobata kamwe bhatani, unogona kukwidziridza nharaunda yako yebasa kana kurara! 3 timer 120/240/480 inoenderera modes pane imwe nguva, simba richadimburwa kana nguva yekumisikidza yasvika yekuti haufanire kunetseka nezve yakanyanyisa humidification.
2.TOP-ZADZIRA DESIGN: Bvisa muvharo kuti uwedzere mvura inotonhorera mutangi remvura, pasisina zvakare kubvarura humidifier yako kuti nzvimbo dzese dzicheneswe, zviri nyore kuzadza uye kuchenesa kupfuura echinyakare humidifiers. ONA: Yakaomarara kana yakasvinwa mvura yakanaka, kuchenesa zuva nezuva kana kwevhiki kunoitirwa hutano hwako
3.HUMIDIFIER: 360 ° madhigirii anotenderera kamwene inovimbisa yakaenzana mwero wehunyoro unogoverwa mumba. Nyadzisa kamuri yekurara zvakanyanya zvakaenzana.
4.AUTO KUSVIRA-KUSHURE, KUSHURE KUSHANDISA: Kuti udzivise humidification yakanyanyisa uye uve nechokwadi chekuchengeteka, humidifier inozovhara kana mvura yapera kana kana renji yemvura yabviswa.
ruzha <35dB (A)
Voltage 220-240 / 50Hz
Rated Power 27W
Light 7 COlor LED chiedza
kunyoresa 25 kusvika 35 mita mitas
Nguva Yokupedzisira 15hours
Safety Auto magetsi-bvisa kana pasina mvura
Ruvara rwebhokisi saizi 19x19x34CM
Package 12 zvidimbu / katoni
Csaizi yema arton 58.5x39.5x69.5CM
N.W / atorwa 11kgs
G.W / atorwa 13kgs
SP-L02 300ML yakasarudzika ultrasonic hwema diffuser
SP-G03 180ml bambom girazi rinonhuhwirira zvinonhuhwirira